काठमाडौं / प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र सहभागी नभएकालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरको परीक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम खनालगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार खनालसहित मेकानिकल इन्जिनीयर योगेन्द्रप्रसाद गुप्ता, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बाबुकाजी गिरी लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित रहेका आठ जनालाई मोटरसाइकल र स्कूटरको लाइसेन्स अवैध रूपमा वितरण गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । यातायात कार्यालयले २०७२ सालमा सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षामा ३ हजार २११ जना उपस्थित भएकामा प्रयोगात्मकमा ३ हजार २६५ जना देखिएका थिए । उनीहरूबाट रू. ५ हजारदेखि रू. १५ हजारसम्म लिई भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले बताएको छ ।
यस्तै, मोही जग्गाको बाँडफाँटमा घूस लिएको अभियोगमा अख्तियारले मालपोत कार्यालय, राजविराजका नायब सुब्बा वासुदेव मण्डलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मण्डलले सेवाग्राहीसँग रू. ४० हजार घूस लिएको अभियोग छ । यसैगरी, मोरङका सहायक वन अधिकृत सल्लाउद्दिन अन्सारीविरुद्ध पनि रू. ३५ हजार घूस लिएको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।